विरोधबाट बच्ने आइडिया
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड⁄ ले हरेक मान्छेलाई फकाउन सधैंजसो नयाँ फर्मुला प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उनले आफू सधैं सहमति र सहकार्यको पक्षमा रहेको बताउन छाडेका छैनन्। सरकारले केही निर्णय गर्छ
कस्का लागि संशोधन ?
अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावका कारण देशैभरि भाँडभैलोको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले किन संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भन्दा असहमत हुनेहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि हो भनिन्छ। तर, असहमतिमा रहनेहरू सहमतिमा आउने
छोरा फकाउदा बुहारी……..
संबिधान संसोधन बिधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड झन अफठेरोमा परेको देखेपछि धरहरा तीन छक परेको छ । मधेशी मोर्चालाई खुसी बनाउन संबिधान संसोधन गरेको भएपनि उनले मधेशी मोर्चाबाट
डा. केसी अहिले आमरण अनशनमा रहेका छन्। मुलुकका एक जना गतिला डाक्टरले जे जस्ता एजेण्डा उठाएर आमरण अनशनरुपी आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो अवश्य पनि स्तुत्य रहेको छ। तर, धरहरा वरपर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय स्वामी रामदेवसँग खिचाएका कतिपय तस्वीर निकै आपत्तिजनक देखिएका छन्। प्रचण्ड कुनै पनि ओहदामा नभएको भए सायद कुनै मतलब हुने थिएन होला। तर, उनी अहिले
अयोग्य हुने डर
एकताका संविधान बनाउने सभाका लागि दलहरुले आन्दोलन गरेको धरहरालाई याद छ। संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो। त्यसपछि संविधान कस्तो बनाउने भनेर दलहरुले आन्दोलन गरेको पनि यसलाई याद छ। बनाइसकेपछि संविधान ठीक
कि लोकसेवाको तयारी गरेको ?
नेपाली नेताहरुको गफ सुनेर धरहरा कहिले गम खान्छ भने कहिले खिलखिलाएर हाँस्छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संविधान बन्नैपर्छ भन्ने कुरा हजारपटक यसले नसुनेको होइन। अहिले संविधान बन्यो प्रक्रिया निष्कर्षमा
प्राधिकरण थाहा नपाउने सांसद
सिंहदरबार परिसरमा एक जना महिला सांसद पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय खोज्दै हिँडेको धरहराले पत्ता लगायो। ती महिला सांसद नाम चलेको पढेलेखेकोमा नै पर्छिन्। उनी प्राधिकरणको कार्यालय पत्ता लगाउन सकिन कहाँ छ
प्रजातान्त्रिक परिपाटी ?
राजनीतिक पार्टीको रमाइलो भागबण्डा देखेर धरहरा पनि चकित खाएको छ। मंगलबार यसले पोखरातिर ध्यान केन्द्रित गर्दा तरुण दलको नेतृत्वको बारेमा रमाइलो गाइगुइँ सुन्यो। त्यस संगठनको नयाँ नेतृत्व कसरी चयन भयो
घुर्की पनि पद पनि
देशको तेस्रो ठूलो दल नेकपा–माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या २ हजार पाँच सय नाघिसकेको छ। निकै लामो समय भयो न त पार्टीको महाधिवेशन हुन सकेको छ न त निर्वाचित कमिटी